Mianatra mampiasa pejy Master amin'ny InDesign | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Fitaovana famolavolana, Tutorials
Misy maro entana haverina mandritra ny lahatsoratra iray, na kely na kely aza. Ohatra iray amin'izany ny ohatra ny nomeraon-pejy. Tarehimarika hita amin'ny toerana tena manokana amin'ny takelaka tsirairay, izay miverimberina mandritra ny famoahana. Ny taolana izay mitarika ny firafitry ny lahatsoratra dia averina ihany koa, ho modely.
Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampiasana InDesign for layout lahatsoratra, dia ny fitantanana an'ity karazana singa miverimberina ity. Misaotra an'i fampiasana marina ny pejy master, hovonjenay ny tenanay amin'ilay asa handika-hametaka eo amin'ireo pejy: hampandehaninay ho azy ny famoronana ny zavatra rehetra izay haverina. Izay no hianaranao hatao amin'ny famakiana ity fampianarana fototra ity amin'ny fampiasana pejy master ao amin'ny InDesign.
1 Pejy Master ao amin'ny InDesign
1.1 Isa amin'ny pejy
1.2 Ny reticle
1.3 Ahoana ny fiasan'ny pejy master
1.3.1 Ary ahoana no ahafahantsika mampifangaro azy ireo?
1.3.2 Ahoana no ahafahantsika mampiditra pejy master amin'ny fiparitahana iray manontolo?
1.3.3 Ary ahoana no ampiharantsika ny pejy master amin'ny fiparitahana / pejy marobe?
1.3.4 Ahoana no fanesorantsika ny pejy master izay efa nampiharina tamin'ny pejy iray?
Pejy Master ao amin'ny InDesign
Midika ny Takelaka pejy (Window> Pejy).
Tsindrio indroa ny kisary amin'ny pejy master Pejy A-Master. Amin'izany no ahafahantsika manitsy ny pejy master izay ananantsika amin'ny banga foana.
Isa amin'ny pejy
Andao ampidiro ny laharan'ny pejy. Mba hanaovana izany dia namorona a boaty lahatsoratra ao amin'ireo takelaka roa ireo. Ao anatin'ny boaty dia tsindrio havanana isika ary mankany Ampidiro ny toetra manokana> Tsoratadidy> Laharana pejy ankehitriny.
Ao amin'ny boatin-dahatsorantsika dia ho hitantsika ny litera A. Ity taratasy ity, rehefa tonga ny manosika, dia ho lasa isa mifanaraka amin'ny taratasy tsirairay.
Misy zavatra tena lehibe tsy tokony hohadinointsika: mbola tsy vonona ny zava-drehetra. Afaka (ary tsy maintsy) ovay ny fijery ny laharan'ny pejinay. Toy ny hoe lahatsoratra hafa izy io, afaka mifidy ny endritsoratra, ny habeny, ny lokony isika ... Ary mazava ho azy, ny toerana misy azy. Raha vantany vao nahitsy ireo masontsivana izay tadiavintsika, dia afaka jerentsika hoe manao ahoana ireo isa nomen'ny pejy.
Mba hanaovana izany, kitiho indroa ny pejy tena misy ao amin'ny antontan-taratasinay.
Ny grid dia ny rafitra izay hiantoka ny fifandanjana sy ny firindran'ny volavolainay. Mba hamoronana azy amin'ny InDesign, mandehana fotsiny amin'ny Layout> Mamorona menio torolàlana.
Hisokatra ny boaty fifampiresahana kely iray izay mangataka aminay ny isan'ny andalana sy ny tsanganana tadiavintsika amin'ny takelaka ho avy. Ho fanampin'izany, mampiditra ny fiheverana ny tatatra, izay tsy inona fa ny habaka eo anelanelan'ny tsipika (na tsanganana). Ampidirinay ny soatoavina tadiavinay ary ny InDesign, matematika, dia manisa ny haben'ny fizarana mba hitahirizan'izy rehetra ny refy mitovy.
Ahoana ny fiasan'ny pejy master
Araka ny hitanao dia manana pejy roa lehibe izahay: ny Pejy A-Master ary ny B-Grid.
Ny takelaka iray ihany no azo tendrena pejy tokana tokana. Inona no dikan'izany, ao amin'ny ohatra asehontsika? Ny takelaka voatendry ao amin'ny pejy master A (miaraka amin'ny isa amin'ny pejy), dia tsy ho afaka hampiasa ny takelaka master page B. ny grid, tsara kokoa ny mampiasa pejy tokana ho an'ireto singa roa ireto.
Ary ahoana no ahafahantsika mampifangaro azy ireo?
Andao mankany amin'ny primitive: copie-paste. Misafidy, ohatra, ny valin'ny pejin'ny master master B isika; adikao izany, mandehana any amin'ny pejy master A ary apetaho. Manaraka izany, hamafana ny pejy master navela foana (B) izahay, satria tsy hampiasa azy io.
Ahoana no ahafahantsika mampiditra pejy master amin'ny fiparitahana iray manontolo?
Tsindrio ny kisary Pejy A-Master: aza avoaka raha tsy miaraka amin'ny mpanoro anao eo amoron'ny ravin-taratasy ianao. Amin'izay fotoana izay dia ho miloko fotsy ireo pejy amin'ilay takelaka, satria nofidinao io: izao vao mila mamoaka ianao. Mahay!
Ary ahoana no ampiharantsika ny pejy master amin'ny fiparitahana / pejy marobe?
Voalohany indrindra, hofidintsika izy ireo: tsindrio ny kisary iray ary tohizantsika ny famerenana azy io, hitazomana ny lakilen'ny Shift ho tsindry. Ankehitriny, raisinay ny pejy master ary ampidininay eo amin'ny fisafidianana takelaka anay.
Ahoana no fanesorantsika ny pejy master izay efa nampiharina tamin'ny pejy iray?
Tsindrio ny kisary pejy, tariho ary alatsaho ao amin'ny faritra volondavenona manodidina azy io. Mahay!
Raha te hanohy hianatra ianao (sy amin'ny halaliny) ny foto-kevitra momba ny pejy master ao amin'ny InDesign, dia manoro hevitra anao aho hahita mpitari-dalana fanampiana ny programa mihitsy (hita an-tserasera).
Fanazavana fanampiny - Torohevitra hampiasa loko ao amin'ny InDesign, Doka 8 InDesign izay hanafaingana ny fivezivezinao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fampianarana fototra: pejy master ao amin'ny InDesign
Kizi 1 dia hoy izy:
Inona no mitondra fampahalalana tsara ho anao, ary tena mahaliana, misaotra
Valiny tamin'i Kizi 1
Salama, azafady, fa manana fanontaniana aho rehefa mamaky ny lahatsoratrao. Ahoana ny fomba ampiharana master amin'ny pejy hafahafa rehetra indray mandeha amin'ny endriny tsy fantatra?
Juan Jordan dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Tsy mahita fomba hanamboarana pejy master aho izay singa vitsivitsy ihany no miova, ohatra: amin'ny boky tantara, izay misy ny lohatenin'ny tantara tsirairay etsy ambony, fa ny ambiny sisa.
PS: Ny Harmony dia tsy misy h, raha tsy izany dia ilay andriamanibavy grika no resahina.
Valiny tamin'i Juan Jordán